China ngokulula ifektri Umthi weplastiki we-WPC abavelisi kunye nabathengisi | ULihua
Into No: LH145H22
IxabisoI $ 2.44 / M
Umbala: Umsedare, itshokholethi, amalahle, ibrown, njl
I-2.4m 3.6m okanye yenziwe ngokwezifiso
IiVillas, iqonga elingaphandle
Grooves + Iflethi
● Ukuhonjiswa kweWPC Eyona nto iphambili yi-PE, imicu yeenkuni kunye nezongezo Ukuhonjiswa kweWPC ithandwa kwihlabathi liphela njengoko sisebenzisa izinto zendalo.
Egqithileyo Umthi ongaphandle waManzi oMdibaniso oHlanganisiweyo
Okulandelayo: Isilayidi esisezantsi sokuLondolozwa kweNkuni esiDityanisiweyo seWPC
Q: Ithini imveliso yakho ye-R & D?
Q: Zithini iinkcukacha zobugcisa zeemveliso zakho? Ukuba kunjalo, zeziphi ezizodwa?
Q: Ngaba ubiza iisampulu?
A: Sibonelela ngeesampuli zasimahla, kodwa iintlawulo zothutho kufuneka zihlawulwe ngumthengi.
Q: Ngaba ungabonelela ngesampulu yeencwadi zokukunceda ukuba uphuhlise intengiso?
A: Ewe, sinokuyila kwaye sihambise iincwadi zesampulu .Ngaphezulu, lilungelo lethu ukunceda abathengi bethu batyebise imarike
Q: Ngaba unganikezela ngokupakisha uyilo ngokwezicelo zabathengi?
A: Ewe. Singaziprinta iibhokisi zephakheji njengoko ufuna. Okanye sinokubonelela ngoyilo oludumileyo lwereferensi yakho.
Q: Liliphi ixesha lokuhambisa?
A: Kwiintsuku ezili-15-25 emva kokufumana iodolo yakho kunye nedipozithi.
WPC decking kumngxuma
WPC Deck umgangatho
Ufakelo Easy yangaphandle Composite WPC Ulenze ...
Insect Prevention Wood Plastic WPC D ...
Ukutshekisha ngaphandle kwe-WPC, WPC nokwadala, ezenziwe ngomthi yeplastiki edityanisiweyo, WPC decking edityanisiweyo, WPC decking umgangatho, WPC decking ngaphandle,